Turkiga oo riyadiisa u rumeeyay wiil Soomaali ah oo farsamo yaqaana - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Wiil yar oo reer Biuuhoodle oo madaxda Soomaaliyeed ee dhoohanaaysha ku fashilmeen inay kartidiisa ka faaiideystaan ayaa Turkigu rumeeyay riyadiisa una qaaday dalkiisa. Wiilkan oo sameeya diyaaradaha iyo baabuurta ayaa rabay inuu ka dhabeeyo hamigiisa oo dalkiisa waxtaro, waxana jira kumanaan sidiisa ah laakiin aan helin fursadan oo kale.
Guuleed Aadan Cabdi waa wiil dhalinyaro oo ku nool Buuhoodle ayaa saxaafadu ka soo duubtey isagoo sameeya qalabyo uu isku xirxirey oo uu ka sameeyay diyaarado wata gantaalkooda laakiin ma helin cid ka caawisa.
Guuleed ayaan ogeyn in hawsha uu haya fududahay laakiin samaynta diyaarad ama gaadhi ay u baahan tahay khibrad intan ka weyn, waana ta dawlada Turkigu ugu qaaday geerishyada waaweyn ee lagu sameeyo diyaaradahooda kuwa la wado iyo kuwa aan la wadinba.
Guuleed ayaa hanti u noqon doona ummada Somaliyeed waase hadduu helo madax caqli inkastoo hadda ayna jirin.
”Waxaan rabaa inaan aasaaso shirkad diyaaradeed, waxa hadda ii muuqdaana maba ah wax aan ku fikiraayay ayuu yiri Guuleed oo la geeyay shirkada ugu weyn Turkiga ee tababarada u furta dadka sidiisa oo kale.
Shirkada ayaa balan qaaday inay geyso xarumaha kale ee difaaca dalka lagu sameeyo.
Madaxda Soomaaliya soo maray oo fadhiidyo ah ayaan laga fileyn inay horumar sameeyaan mudada ay joogaan kursiga